Fanadinadinana amin'ny Dr. Graham Edgar | Reef Resilience
Resadresaka niaraka tamin'i Dr. Graham Edgar
Apr 28, 2014 | Vaovao
Toetran'ireo karazana fivezivezena MPA
Dr. Graham Edgar sy ny mpiara-dia 24 dia vao haingana no nanentana ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana miaraka amin'ny lahatsoratr'izy ireo, "Ny vokatra ankapobeny momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia miankina amin'ny sehatra fiarovana marin-toetra dimy manana endrika fototra". Amin'ity lahatsoratra ity dia mamerina mijery ny 87 MPAs ao amin'ny tranonkalan'ny 964 (any amin'ny firenena 40) manerana izao tontolo izao amin'ny fampiasana ny angon-drakitra natolotry ny mpanoratra sy ny mpitaiza mamonjy fialamboly.
Ny fehin-keviny ankapobeny dia ny tanjona maneran-tany momba ny fiarovana ny Fifanarahana momba ny fahasamihafana eo amin'ny biolojika izay miorina amin'ny sehatry ny MPA ihany aza manatsara ny fiarovana ny harena voajanahary. Hitan'izy ireo fa ny MPA mahomby (refesina amin'ny biodiversity, biomass trondro lehibe ary biomass shark) dia mila manana 4 na 5 amin'ireto toetra manaraka ireto: tsy maka, ampiharina tsara,> 10 taona,> 100 km2 amin'ny habeny, ary atokana amin'ny rano lalina na fasika. Mampalahelo fa ny 9 amin'ireo 87 MPA ihany no nanana 4 na 5 tamin'ireo toetra ireo, ny ankamaroan'ny sisa tavela amin'ny MPA dia tsy misy miavaka amin'ny ekolojika amin'ireo tsy MPA. Manantena ny mpanoratra fa ny tahiry izay matotra amin'ny valim-piainana biodiversité dia handray ireo toetra 5 (raha azo atao) ary hahita haingana ny fitomboana haingana amin'ny fahafahan'ny tranokala hanana isa biomassa sy isan'ny karazany avo lenta. Ianao dia afaka jereo ilay taratasy eto, ary jereo ny resadresaka miaraka amin'ny sasany amin'ireo mpanoratra.
Nanontany anay ny Dr. Edgar ary izao no nolazainy:
Inona no azon'ilay mpitantana ny MPA, vao haingana kokoa, na tsy voatokana, amin'ity taratasy ity, satria mety tsy ho afaka hamaha ny olana amin'izany izy ireo?
Mifantoka amin'ny fampiharana tsara, indrindra amin'ny safidy tsara avy amin'ny fiarahamonina ao an-toerana, ary koa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny polisy raha ilaina izany. Ny New MPAs dia hihantitra, noho izany ny fampiharana tsara sy ny faritra tsy misy atahorana, dia azo tanterahina amin'ny ankamaroan'ny toerana ny tanjona isan-karazany. Tsy azo antoka izany, na izany aza, ny fanaraha-maso ara-tontolo iainana dia ilaina mba hahalalan'izy ireo ny asa sy ny zavatra azo hatsaraina, fa tsy ny fiheverana fa tsara daholo ny zava-drehetra eny ambanin'ny ranomasina.
Momba ny fiaraha-miasa amin'ny mpanafatra manana traikefa, manam-pahaizana ary mpitsangantsangona mba hanangonana tahiry ho an'ity fianarana ity: inona no homenao ireo manampahefana mpitrandraka haran-dranomasina miasa (na te hiara-miasa amin'ny mpitaingina) ho an'ny programa fanaraha-maso? Inona avy ireo lafiny amin'ny ampahany amin'ny tahirin-kevitra momba ny angon-drakitra hitarika amin'ny fahombiazana?
Nahita ny fandraisan'anjaran'ny vondrona izay nanampy tamin'ny fanadihadiana izahay, izay nahafinaritra kokoa rehefa nifampikasokasoka ny mpikirakira fanirian-daza sy ny fitiavan-tena. Ankoatra izany, ny fampiofanana iray sy ny fanohanana ny mpilatsaka an-tsitrapo mpanolo-tena ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Reef Life Survey (RLS) dia fototry ny fanangonana tahirin-kevitra. Ny mpitaingina dia afaka mahita fa ny ezaka ataon'izy ireo dia mitondra mivantana amin'ny fitantanana ny fitantanana ny fiarovana ny tontolo iainana. Saika ny mpandeha isan-karazany manomboka ny fanombohan'ny programa RLS enin-taona lasa izay dia mbola mafana fo ary mbola manohy mandray anjara, statistika tena tsara.
Inona no nahagaga anao indrindra tamin'ny fanaovana io fianarana io?
Momba ny biôlôjia: ny tsy fisian'ny antsantsa sy ny hazandrano hafa manjavozavo izay hitan'ny mpitaingina hafa fa tsy amin'ny MPA, na dia avy amin'ireo nosy tsy misy mponina aza. Raha ampitahaina amin'ny tatitra avy amin'ireo jiro mitoka-monina sy ny mpitaingina ao amin'ny faritra iray ihany dia folo taona na roa taona monja, mazava ho azy fa nihena be ny isan'ny trondro goavam-be sy ny goaika tato ho ato.
Mikasika ny fitantanana: ny tontolon'ny firenena an-dalam-pandrosoana sy ny Ila Bolantany Atsimo dia mitarika ny fametrahana tambajotra MPA. Firenena Aziatika sy avy any Eoropa no manana MPA kely mahomby, na dia eo aza ny fihenjanana ara-tontolo iainana sy ny harena an-dranomasina marobe izay miavaka sy miavaka, saingy miharatsy.
Inona ny ampahany amin'ireto fikarohana ireto no nahatonga anao hahatsapa ny fanantenana indrindra amin'ny hoavin'ny MPA?
Ny fanorenana vao haingana ny MPA tsy misy mpitsoa-ponenana any amin'ny faritra mitoka-monina dia dingana tsara. Mazava ho azy fa singa iray amin'ny rafitra MPA iray iraisam-pirenena izany - isika dia mila mahomby MPAs amin'ny karazam-pamokarana samihafa mba ahafahana manangona ireo karazam-biby rehetra maneran-tany - saingy mahafinaritra ny mahita trano fialan-tsasatra izay hanampy amin'ny famerenana ireo karazan-karazana lehibe , farafaharatsiny any amin'ny tropika.